Fahatakarana ny fahefan'ny mpisolovava | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny tanjon'ny Power of Attorney dia ny hahatonga ny fisoloan-tena ho an'ilay olona notendrenao hanao ny fifampiraharahana ho ara-dalàna sy manan-kery. Raha te hangataka olona hisolo tena na hisolo tena anao ianao amin'ny raharaha ara-dalàna manokana toy ny raharaham-barotra na raharaha ara-dalàna hafa, dia mila taratasy avy amin'ny mpisolovava ianao mba hanome alalana ny solontena ary izany no antsoina hoe Power of Attorney (POA). Misy karazana Power of Attorney izay tokony ho fantatrao alohan'ny hanaovana izany. Na izany aza, ny fitsarana dia tsy tafiditra amin'ny fahefan'ny mpampanoa lalàna raha tsy amin'ny trangan'ny tsy fahafahan'ny olona voalohany mandray fanapahan-kevitra. Alohan'ny hamoahana ny Fahefana Mpisolovava dia tsy maintsy ampianarina ny fomba fiasa sy ny karazana azy.
Inona ny Herin'ny mpisolovava?
Ny “Power of Attorney” dia taratasy an-tsoratra ampiasaina rehefa mangataka olona hisolo tena anao amin'ny raharaha ara-dalàna, ara-bola, na fanananao ianao. Na izany aza, mety amin'ny endrika ara-dalàna ny Fahefan'ny Attorney fa mbola tsy endrika fitsarana. Raha misy olona tsy afaka mandray fanapahan-kevitra manokana (ohatra, ao anatin'ny coma, tsy fahaiza-manao ara-tsaina, sns.) ary mila solontena handray fanapahan-kevitra, dia mety handray anjara amin'izany ny fitsarana handidy ny Fiarovana ara-dalàna na Conservatorship ho an'ilay olona izay hanao izany. misolo tena koa.
Inona no azonao atao amin'ny alàlan'ny fahefana?
Ny fahefana mpisolovava dia manome fahefana ara-dalàna ny mpisolovava mba hifampiraharaha amin'ny antoko fahatelo toy ny banky na ny filankevitra eo an-toerana. Ny fahefan'ny mpisolovava sasany koa dia manome ny mpisolovava ny fahefana ara-dalàna handray fanapahan-kevitra amin'ny anaran'olon-kafa, toy ny toerana tokony hipetrahany na raha tokony hanatona mpitsabo izy ireo.
Inona no atao hoe fahefana mpisolovava, ary nahoana ianao no mila izany?
Iza no mila fahefana mpisolovava maharitra? Ny fahefan'ny mpisolovava dia takiana amin'izay rehetra maniry hanome alalana olona iray hafa hanao hetsika ara-dalàna amin'ny anarany (na POA). Ny taratasy fanomezan-dàlana dia afaka manome fahefana amin'ny olon-kafa hitantana ny olana ara-bola, hanao safidy ara-pitsaboana, na hikarakara ny zanakao.
Ity karazana ity dia ho an'ny raharaha ankapobe izay manana fetra tsy voafetra sy ny faharetan'ny fahazoan-dàlana hisolo tena ny talen'ny hetsika amin'ny fifampiraharahana ao anatin'izany ny raharaha ara-bola mandra-pialan'ny tale. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fahefan'ny mpisolovava ankapobe (GPoA) dia fitaovana ara-dalàna manome alalana ny olona iray (antsoina hoe solontena) hiasa amin'ny anaran'ny hafa (ny tale). Natolotry ny tale ho an'ny mpandraharaha izany andraikitra izany satria tsy afaka manao safidy ho an'ny tenany izy. Ity GPoA ity dia amin'ny ankapobeny, ary nomena fahefana hanao safidy ara-dalàna, ara-pitsaboana, ara-bola ary ara-barotra (fa tsy trano). Tsy azo ovaina izany, ary tsy maintsy manaiky ny hanaiky izay ataon'ny GPoA ny tale.
Ny fahefan'ny mpisolovava manokana dia mamela ny solontena hanao fifampiraharahana manokana ataon'ny tale. Ny fampiasana matetika ny fahefana manokana avy amin'ny mpisolovava dia amin'ny fanamarinana ny sonia kaonty sy ny sonia fifanarahana. Ny raharaham-barotra momba ny trano ihany no azo soratana ao amin'ny fanjakana ary tsy voatery hosoratana ny varotra hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fahefan'ny mpisolovava manokana (SPoA) dia fitaovana ara-dalàna manome alalana ny olona iray (antsoina hoe solontena) mba hisolo tena ny hafa (ny tale). Natolotry ny tale ho an'ny mpandraharaha izany andraikitra izany satria tsy afaka manao safidy ho an'ny tenany izy. Ity SPoA ity dia manokana momba ny fananana. Tsy azo ovaina izany, ary tsy maintsy manaiky hanamarina ny zavatra ataon'ny SPoA ny tale. Rehefa tsy afaka manao safidy ho an'ny tenanao ianao dia mampiasa POA. Mety ho noho ny olana ara-pahasalamana izany na ny tsy azonao atao, fa tsy maintsy, eo amin'ny ara-batana hanao izany.
Inona ny herin'ny mpisolovava maharitra?
Ny fahefana mpisolovava maharitra (na POA) dia ampiasaina amin'ny fandrafetana trano ary antsoina hoe fe-potoana tsy voafetran'ny Fahefana Mpisolovava. Ny faharetan'ny POA dia manomboka rehefa manome ny sonianao sy ny fahaizanao mandray fanapahan-kevitra amin'ny olona iray antsoina hoe solontenanao ianao. Omenao ny solontenanao ny fahafaha-manao feno ho anao amin'ny fifampiraharahana manokana izay nekenao hatolotra azy, ny fifanarahana dia manan-kery miaraka na tsy misy fifanarahana raha mbola eo anatrehan'ny Mpisolovava anao ianao.
Raha tsorina, ny fahefana mpisolovava maharitra dia iray izay mitohy amin'ny heriny mandra-pahafatin'ny tale na mandra-pialan'ilay fitaovana. Ny fahefana mpisolovava maharitra, izay tsy maintsy ambara mazava ny faharetan'izany, dia mbola mandaitra na dia tsy afaka mandray fanapahan-kevitra manokana noho ny tsy fahafahany aza ny tale. Ho solon'izany, ny fahefana mpisolovava “tsy maharitra”—izay tsy manana fepetra maharitra—dia lany andro noho ny tsy fahafahan'ny tale. Ny fitsipika mifehy ny fahefan'ny mpisolovava dia tsy mitovy amin'ny fanjakana tsirairay.
Eritreritra 2 momba ny "Fahatakarana ny fahefan'ny mpisolovava"
11/14/2015 amin'ny 9:10 maraina
Izaho dia manao sonia ny herin'ny jeneraly mpisolovava ary ny fanontaniako dia,
1) tsy maintsy mandeha any am-ponja ve aho, na hiaritra ny lalàna mifehy ny fitondrana UAE raha toa ka miatrika raharaha any amin'ny polisy dubai na fitsarana manokana ny filoha rehefa tsy olona any EEE?
2) Ny soniako ara-batana dia mitaky amin'ny taratasy fanoratana jeneraly an'ny Fampanoavana?
3) inona ny maha-ara-dalàna io fifanarahana io raha jerena ny fotoana?
4) amin'ny fotoana hanafoanana ny herin'ny mpisolovava amin'ny ankapobeny, tsy maintsy mitaky amin'ny UAE ny filoha?
omeo azafady aho ASAP.
11/17/2015 amin'ny 2:40 maraina